Digniinta ama joojinta qaadashada gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ay bixiso
Haddii aad tusaale ahaan si fir-fircoon u raadin waydo shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga, waxaad heli kartaa digniin. Haddii taasi dhacdo dhowr mar waxaa lagaa joojin karaa gunnada lacagta ee aad hesho hal ama dhowr maalmood.
Maxaa dhacaya haddii aanad samayn wixi ay ahayd inaad samayso?
Maamulka Xafiiska shaqada waxaa waajib ku ah in maamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] u wargeliyo haddii wax dhacaan, taasoo saamayn ku yeelan karto xaqa qaadashada gunnada. Haddii nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelin, kaalin ka geysato xaaladda shaqo la`aanta ee aad ku sugan tahay waxaan wargelin doonaa maamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa]. Waxay noqon karaan inaad soo dirin Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten], ka qaybgelin kulan ama aadan hab firfircoon shaqo u raadsan. Kaddib maaamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ayaa kula soo xiriiri doono, waxaana lagu siin doonaa fursad aad ku macanyso sababta.
Haddii maamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] aadan guulaysan inaad qanciso, wuxuu go`aamin doonaa digniin ama in dhawr maalmood aan wax lacag ah aan lagu siinin.
Haddii aanad samayn wixi aynu ku heshiinay waxaad dayacday shaqo raadintaada.
Tani waxay keeni kartaa in lagu siiyo digniin ama lagaa joojiyo gunnada lacagta ee aad ka hesho qasnadda shaqo la’aanta
Nidaamyada shaqo raadsashada waxaad ku tixgelin kartaa adigoo:
Wadajir anaga noo keento qorshe
Habsaamid la`aan soo dirto Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten]
Ka qaybgasho kulamada ama nala soo xiriirto markii aan ballan ku qabano.
Waa in khadka taleefanka lagugu heli karo haddii aan ku heshiino in aan ku soo wici doono
Waa inaad raadsato booska shaqada aan kugu guubaabinay (anvisat) inaad raadsato
Waa inaad bil kasta hab firfircoon shaqo u raadsato, sida shaqooyin boos ka bannaan oo la soo xayeeysiiyay, ama aad wargelisay inaad xiisaynayso ama aad shirkadda shaqo-bixiyeha ah siisay cv-gaaga, ama kuwa Xafiiska Shaqada kugu gubabiyay inaad arjay u qorato (anvisat), ama ku siiyay naseexada booska shaqo ee bannaan.
Tani ayaa dhacda haddii aad dayacdo shaqo raadintaada
Marka ugu horeysa: waxaad helaysaa digniin
Marka labaad: 1 maalin oo bilaa magdhab ah
Marka sadexaad: 5 maalmood oo bilaa magdhab ah
Marka afaraad: 10 maalmood oo bilaa magdhab ah
Marka shanaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub
Haddii aad dheerayso shaqo la'aantaada
Haddii aad diido shaqo, tababar shaqo ama barnaamij kale ama hawl, markaasi waxaad dheeraysay wakhtigaaga shaqo la'aanta.
diido shaqo haboon
si kas ah u caqabadayso shaqo inay suurta gasho
diido barnaamij suuqa shaqada ah
Tani ayaa dhacaysa haddii aad dheerayso shaqo la'aantaada
Marka ugu horeysa: 5 maalmood oo bilaa magdhab ah
Marka labaad: 10 maalmood oo bilaa magdhab ah
Marka sadexaad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
Marka afaraad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
Haddii aad iska casisho shaqo markaasi waa adiga qofka sababay shaqo la'aantaada.
iska casisho shaqadaada iyadoo aanay jirin sabab ansax ah
sababto inaad ku khasbanaato inaad joojiso shaqadaada
joojiso barnaamij suuqa shaqada ah iyadoo aanay jirin sabab ansax ah
u dhaqantay qaab keenay inaad joojisay barnaamij suuqa shaqaa ah.
Tani ayaa dhacaysa haddii aad sababtay shaqo la'aantaada
Marka ugu horeysa iyo marka labaad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
Marka sadexaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub
Haddii aad si kas ah u dhiibtay macluumaad qalad ah
Qasnada shaqo la'aantu waxay go'aamin kartaa in lagaa joojiyo magdhabkaaga wakhti muddo dheer ah. Tani waxay khuseysaa haddii aad si kas ah ama dayac xun aad qasnada shaqo la'aanta ugu dhiibtay macluumaad qalad ah ama marin-habaabin ah oo qaabkaas aad ku heshay magdhab ka badan intii aad xaqa u lahayd.
Lacagta gunnada laga helo caymiska shaqo la'aanta
Si aad lacag u hesho marka aad bilaa shaqo tahay waxaad gunno lacag ah ka codsan kartaa qasnadda shaqo la’aanta. Halkan waxaad ka akhrin kartaa nooca shuruudaha khuseeya iyo sida aad u codsanayso lacagta gunnada.